Tongasoa eto amin'ny Tanàn-dehibe momba ny fananan'ny mpanorina trano sy trano, izahay dia Orinasa fitantanana fananana mihombo manerantany ho an'ny fifanakalozana trano mihaja. Orinasa tena mahatakatra ny zavatra ilainao sy ny nofinao. Momba ny fananana • efitrano fatoriana 03 • efitrano fanasana 06 • lakozia 02 miaraka amina asa vita amin'ny hazo • fidiovana misy fidiovana • fijanonana fiara • 02 efitrano fandraisam-bahiny lehibe • efitrano fanaovana sary • efitrano vovoka • efitrano fivarotana 02: taila + gorodona • efamira mpanompo 01 • trano ananan'ny tompony • Fipetrahana • Fandraisana mampiavaka an'i GalleryBahria Town • Fiaraha-monina azo antoka ny tanànan'i Bahria • 24/7 Jiro misy herinaratra • Eo ambanin'ny tariby mandeha amin'ny herinaratra ambanin'ny tany • Grand Jamia Masjid • Tilikambon'i Effilee • Parc lohahevitra • Safari Mall • Bahria Mart • Macdonalds • Zoo • Cine Plex Gold 3d Sinema • Paompy solika • Rose Garden • Akademia Cricket • Mini Golf Club • Country Club • Sekolim-pianakaviana iraisam-pirenena ao Bahria • Rafitra sekoly ambaratonga trano Beacon • Rafitra sekoly IPS • Kolejin'ny fitsaboana Akhter Saeed • tovovavy sy zazalahy mpivahiny • Manakaiky loatra ny oniversite Beacon House, University Superior , Imperial College • Anjerimanontolon'i Comsat sy oniversite Lahore • View Canal • Hotely Bahria Grand • Fitsarana Sakafo Safari • Fitsarana sakafo F Sector F • Gloria Jean • Bank Square • Faritra ara-barotra lehibe • Manakaiky ny fifanakalozana lalana Ring • 15 minitra avy amin'ny seranana an'habakabaka Allama Iqbal • Nea r mankany Multan sy Canal RoadDrafitra tantara roaFifandraisana feno momba ny UPS sy ny Generator vita ao an-tranoCat Real Estate Deal in Brand New Luxury, Designer, furnished and Non furnished trano in all Sectors of Bahria Town And DHA Lahore. Izahay dia manana trano 5, 8, 10 Marla 1,2 Kanal, trano sy trano fisaka azo amidy hividianana trano arakaraka ny filanao tanjona kendren'ny fampiasam-bola honenana noho ny vola miditra sy ny tanjona fivarotana. Izahay koa dia mifampiraharaha amin'ny teti-dratsy fonenana sy ara-barotra ao amin'ny tanànan'i Bahria Town ary DHA Lahore, izahay dia mino ny Face to Face Deal ary komisiona 1% ihany no takianay amin'ny fifampiraharahana rehetra. Tsy misy fifanarahana eo ambanin'ny latabatra. Transparency 100% amin'ny Deal rehetra UK, USA ary Europe Level of Service. Tanànan'i Bahria Tanàna lehibe any Lahore, toerana ahatahoran'ny harena ara-kolontsaina an'i Pakistan ny fananany ara-tantara, ny urbanisation dia efa nanova ny endriny ho metropolitan maoderina. Ny fivoaran'ny fiakaran'ny vidim-piainana ary ny fitomboan'ny isan'ny mponina tsy mitsaha-mitombo dia niditra an-tsokosoko nanerana ireo maitso voajanahary izay sonia an'ny tany tanànan'ny renirano dimy. Ny fivoaran'i Bahria Town Lahore dia mamerina ny fanahin'ny tanin'ny maitso miaraka amina fomba maoderina. Ny famolavolana maoderina dia mamelona indray ny toerana iombonan'ny tanàna miaraka amin'ny lakandranon'i Lahore malaza. Ny aina dia voasarika ao amin'ny tanànan'i Bahria Lahore miaraka amin'ny fanomezana fitaovana mahazatra indrindra sy maoderina indrindra ahafahan'ny fomba fiainana feno. Ny fivoaran'ny fanjakan'i Bahria Town Lahore dia ny faran'ny tantara manan-karena amin'ny tanin'ny Punjab. Izy io dia mandrafitra ny vanim-potoanan'ny tantara ara-kolontsaina manan-karena ho avy mamiratra sy mandroso. Be lemaka ny lemaka amoron-tsiraka maitso voajanahary ary mampiantrano ny fomba fiainana mandroso indrindra nefa tsy maintsy ampifanarahan'ny fampandrosoana hafa. Trano fiompiana, endrika bungalow nentim-paharazana misy endrika tany midadasika, fonenana toekarena ary fomba fiaina mihaja no mirindra mba hamolavola ny fiarahamonina marobe sy maro karazana. Ny tobim-pahasalamana sy ny fialamboly miaraka amin'ny tombony ara-barotra sy ara-barotra dia mametraka an'i Bahria Town Lahore ho iray amin'ireo toerana mandroso sy manararaotra indrindra ao Pakistan. Miaraka amin'ny distrikan'ny raharaham-barotra futuristic an'ny Lahore izay kasaina hatao sy eo an-dàlam-pandrosoana eto; ireo orinasam-pananganana sy misongadina dia mizaha ny ho aviny miaraka amintsika. Ireo teti-ponenana mihanaka dia napetraka sisin-tany amin'ireo faritra ara-barotra sy indostrialy amin'ny fomba iray izay nanamafisan'izy ireo bebe kokoa ny sehatry ny fandraharahana sy ny fomba fiainanan'ireo fivoaran'ny mpisava lalana ao amin'ny tanànan'i Bahria Town. Ho an'ny tanjona hividianana, hividianana ary hividianana vola, azafady aza misalasala mifandray aminay: Call / WhatsApp / Email
20,000 PKR / Isam-bolana